Global Voices teny Malagasy » Ilay Vehivavy Saodiàna Nitondra Rivodoza Raha Nandray Familiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Aogositra 2017 16:07 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Tantely
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Manal al-Sharif, mpanoratra. Sary: Nomen'i Simon sy Schuster maimaimpoana.
Ito tantara avy tamin'i Joyce Hackel  ito dia niseho voalohany tao amin'ny PRI.org , ny 14 Jona 2017. Naverina navoaka eto ho ampahan'ny fiarahamiasa eo amin'ny PRI sy Global Voices.
Nahatezitra olona maro tao amin'ny fanjakana fatra-mpitàna ny nentin-drazana i Manal al-Sharif rehefa namoaka lahatsariny mitondra fiara tany Arabia Saodita ny taona 2011.
“Avy tamin'ny fikambanana ara-pivavahana ny tamberina ratsy indrindra,” hoy izy. “Nataon'izy ireo ny Toriteny ny andro Zoma, ary noho ny nitondrako fiara fotsiny, niantso ahy ho toy ny mpivarotena izy ireo.”
Niafar tany am-ponja i Al-Sharif. Naharay fandrahonana ho faty izy. voatery niantso ny mpanjaka Saodiàna mihitsy ny rainy mba hamotsorana azy. Saingy efa lasa niparitaka be tamin'ny Aterineto anefa ilay lahatsarin’ ny mampiseho ilay fihantsiany teo am-pamiliana, izay nahazo mpijery maherin'ny 700.000 tao anatin'ny andro iray monja, nanome hery ilay fotoana erantany mba hanafoanana ny fandraràna ireo vehivavy tsy ho afaka mitondra fiara any Arabia Saodita.
Amin'izao fotoana izao, mbola iray amin'ireo feo mahery miantso ny fanjakana mba hanafoana ny fandraràna mitondra fiara ihany ilay mpikatroka mafana fo 38 taona. Ao amin'ny bokiny vaovao, “Mahasahy Mamily Fiara: Mifoha Ny Vehivavy Saodiàna ,” manoritsoritra ny fitomboany tao Lameka toy ny mpino mafy orina ao amin'ny Silamo nentin-drazana i Al-Sharif. Nony feno 18 taona izy dia nisoratra anarana tao amin'ny Anjerimanontolon'ny King Abdulaziz any Jeddah. Nihaona tamin'ireo vehivavy malalaka izay tsy nanarona ny tavany teny imasom-bahoaka izy, ary nanomboka niova ny fijeriny ny tontolo. Nanomboka nanitikitika azy ny fiheverana ny fisian'ny lehilahy mpiambina.
“Heverina ho tsy ampy taona ny vehivavy manomboka amin'ny fotoana ahaterahany hatramin'ny fotoana ahafatesany,” hoy izy. “Raha mitondra fiara ireo vehivavy, ao amin'ny fireneko, hanana ny feo sy ny fahefana ary ny finoana izy ireo fa ho afaka manao ny zavatra rehetra ary hihetsika izy ireo hamàrana ny rafitra fisian'ny mpiambina.”
Milaza i Al-Sharif fa ny fanentanana ataony #women2drive (vehivavy mamily fiara) dia mitohy manosika ny fetran'ny azo eken'ny fiarahamonina any Arabia Saodita. Ato anatin'ireo volana ho avy, ho avoaka amin'ny teny Arabo ihany koa ny bokiny “Daring to Drive” (Mahasahy Mamily Fiara).
“Misy hetsika maro be herim-po mitranga, mihamaro ireo vehivavy mandefa ireo lahatsarin'izy ireo mamily fiara ary mihamaro ihany koa ireo lehilahy manjohy anay,” hoy izy. “Hanohy hanentana izahay, mampiasa ireo fitaovana rehetra afaka ampiasainay.”
Vakio eto  ny toko voalohan'ny “Daring to Drive “:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/08/105155/
 niseho voalohany tao amin'ny PRI.org: https://www.pri.org/stories/2017-06-14/meet-saudi-woman-who-ignited-firestorm-when-she-got-behind-wheel
 Mahasahy Mamily Fiara: Mifoha Ny Vehivavy Saodiàna: https://www.amazon.com/Daring-Drive-Saudi-Womans-Awakening/dp/1476793026